Ku Wadista Dareenka Xashiishka "Khatar Ka Yar" Marka Loo Fiiriyo Daroogooyinka Qaar Loo Qoro • Dawooyinka Inc.eu
Australië - Cilmi-baare u dhashay Australia ayaa soo jeedinaya in wadista baabuurka iyadoo la sakhraansan yahay xashiishadda ay ka khatar yar tahay wadista darawalka dawooyinka qaarkood.
1 Australia gudaheeda dadka waxaa laga dacweeyaa isticmaalka xashiishka dawada ah
2 Ku wadista baabuurka xashiishadda khatarteedu way ka yar tahay
Falanqeyn dhowaan uu sameeyay borofisar Iain McGregor oo ka tirsan The Lambert Initiative oo loogu tala galay Cannabinoid Therapeutics ee jaamacada Sydney, wuxuu ku dooday in daroogooyinka qaar ay ka khatar badan yihiin isticmaalka xashiishadda inta ay wadaan.
Wuxuu yidhi: Khatartu waxay u badan tahay inay aad uga hooseyso dawooyinka badan sida dawooyinka murugada, opioids iyo benzodiazepines.
Professor McGregor wuxuu ogaaday in opioids iyo benzodiazepines ay ka badnaan karaan laba jibaar halista shilalka.
Australia gudaheeda dadka waxaa laga dacweeyaa isticmaalka xashiishka dawada ah
In ka badan 2021 oo qof ayaa loo qorey xashiish daawo ah tan iyo bishii Maarso 100.000, laakiin in badan ayaa la dacweeyey markii lagu qabtay iyagoo daroogada cunaya.
Justin Sinclair, oo ka socda shirkadda dawada xashiishadda Kooxda Daaweynta Dabiiciga ee Australia, ayaa sheegay in waddanku u baahan yahay caddeyn ku saabsan xeerarka iyo in laga dhaafo sharciyada wadista daroogada ee dadka soo qoray xashiishadda dawada.
Ku wadista baabuurka xashiishadda khatarteedu way ka yar tahay
Waxaa jira cadeymo dheeri ah oo taageeraya aragtida Professor McGregor. Ku wadista wadista daroogada cannabis shaki la'aan waxay leedahay halisteeda, laakiin badanaa waxaa loo tixgeliyaa iyada oo saameyn ku leh daroogooyinka kale.
Ku wadista wadista daroogada badanaa waa ka khatar badan tahay marka aad isticmaaleyso xashiishad (afb.)
Cilmi-baarista hadda jirta waxay soo jeedinaysaa, tusaale ahaan, in badan oo ka mid ah kuwa kaxeeya ka dib markay isticmaalaan xashiishadda ay u muuqdaan inay magdhow ka helayaan iyagoo ku kaxeynaya xaddidaadda xawaaraha iyo inay khataro ka yar galaan.
Si kastaba ha noqotee, mid cilmi baaris in, sida isticmaalka khamriga, "Isticmaalka xashiishku wuxuu kordhiyaa waqtiga jawaabta iyo tirada jawaabaha qaldan ee xaaladaha degdegga ah".
Sida laga soo xigtay cilmi baaris laga sameeyay Faransiiska, darawallada khamriga cabbaa waa 17,8 jeer (12,1-26,1) oo ay u badan tahay inay mas'uul ka yihiin shil dhimasho ah, halka isla tirada la xiriirta xashiishka ay tahay 1,65 jeer (1,16) -2,34).
Ilaha ay ka mid yihiin AAP (EN), ANTG (EN), Canex (EN), NCBI (EN), Da '(EN)
khamrigaIsticmaalka khamrigaaustraliacannabiscilmi baaris
Nidaamka Digniinta Dadka Waaweyn ayaa ka hortagaya in dambi lagu soo oogo dadka isticmaala xashiishadda ee Ireland
Isbadal taariikhi ah, xarunta Garda ee Ireland waxay dhawaan shaacisay in isticmaalka shaqsiga ah ee xashiishadda ...
Sharciga cusub wuxuu u sahlayaa bangiyada inay fududeeyaan shirkadaha cannabis
Guddi koongares ah ayaa u codeeyey khamiistii in la meel mariyo sharci xaddidaya marinnada shirkadaha marijuana ay ku leeyihiin bangiyada ...